पार्टी फुटे त्यसको जिम्मेवारी ओलीले लिनुपर्छ, हरिबोल गजुरेलसँगको अन्तरवार्ता | Ratopati
personफणिन्द्र नेपाल exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक २५, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । नेकपा भित्रको उतारचढावमा कहिले ओली खेमा त कहिले प्रचण्ड–माधव खेमामा उभिन पुग्ने नेता हुन्– स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल । अध्यादेश प्रकरणमा ओलीको चर्को विरोध गरेका गजुरेल प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दा त्यसको विपक्षमा उभिन पुगे । हाल स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयनका सवालमा भने ओलीकै कमजोरी देख्ने गजुरेल पार्टी विभाजन रोक्न भूमिका खेलिरहेको दाबी गर्छन् । उनको बुझाइमा नेकपा विभाजनको डिलमा पुग्नुमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डकै कमजोरी देख्छन् । पार्टी फुटे समग्र उपलब्धि नै गुम्ने खतरा रहेको बताउने गजुरेललाई कसरी जोगिएला त नेकपाको एकता भनेर रातोपाटीले प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ गजुरेलसँग गरिएको कुराकानी :
मिटिङ हुन्छ, छलफल हुन्छ, सहमति पनि हुन्छ । तर फेरि फर्केर पुरानै अवस्थामा पुग्छ । पार्टीमा पटक पटक किन यस्तो समस्या आइरहन्छ ? एउटै कुरा किन दोहोरिरहन्छ र बहस भइरहरन्छ ? मेरो बुझाइमा यस्तो हुनुमा नेताहरू आफूतिर नफर्किएकाले हो । कोही पनि नेताहरू आफूतिर फर्किनु भएन । एकले अर्कोले दोष दिने प्रवृत्ति छ, उसले गर्दा एउटाले भन्ने अर्कोले फेरि उसले गर्दा पो त भन्ने भइरहेको छ । कुनै विषय या घटनामा कसैको कमजोरी भएको हुनसक्छ त्यसमा यो ऊ भन्ने कुरा होइन तर आफूतिर नफर्केसम्म एकता हुनै सक्दैन । यसले विमति बढाउँदै लैजान्छ । हामीले देख्दा कसकसको कमजोरी हो भन्ने छ्याङ्ग देख्छौँ । प्रधानमन्त्रीका केके कमजोरी छन् र अध्यक्ष प्रचण्डका केके कमजोरी छन् भन्ने हामीले प्रस्टै देखेका छौँ ।
राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर देश एक ढिक्का भइरहेको अवस्थामा दुवै पद छोड्नुस् भन्दा राम्रो सन्देश जाँदैन भनेर त्यो कुरालाई हामीले साथ दिन सकेनौँ । कारबाही गर्ने र हटाउने कुराले पार्टी विभाजनतिर लान्छ भनेर त्यसलाई पनि रोकियो । र, पछिल्लो समय कार्यदल बन्यो । कार्यदलको रिपोर्ट अनुसार सचिवालय र स्थायी समितिले निर्णय गर्दै नयाँ सिराबाट पार्टी एकताबद्ध भयो । त्यो पछि उहाँहरूका बाध्यता, जटिलता, समस्या होलान्, भित्र केके बहस भएका होलान त्यो अर्को कुरा हो तर बाहिर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री राजदूत नियुक्ति गर्दा एकलौटी गर्नुभयो भयो भन्ने देखियो । यस्तो देखिएपछि यो त ओलीमा कस्तो पेलेर जाने प्रवृत्ति रहेछ भन्ने कुरा कार्यकर्ता र जनतामा परिहाल्यो । यस्तो भएपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ तपाईंले ‘मिस’ गर्नुभयो । तपाईंका बाध्यता वा अप्ठ्यारा थिएनन् होलान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईंको कामले म्यासेज राम्रो गएन भन्यौँ । तपाईंका दुवै पद सुरक्षित भएर नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भने व्यवहारबाटै म्यासेज दिन यसलाई करेक्सन गरेर स्थायी समितिको स्प्रिटलाई हुबहु लागू गर्नुस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ ।
अहिले त संविधानको कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीमा बढी छ । उहाँ पार्टी अध्यक्ष मात्रै होइन । अध्यक्ष मात्रै नभएर राष्ट्रकै प्रधानमन्त्री समेत भएकाले परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई यताउति गर्ने काम गर्नै हुँदैन । हामीले पनि पनि पार्टी फुटबाट बचाउन अरू कारणले खोजेको होइन । यो पार्टी मजबुत होला कि ? सानो होला कि ? ठूलो होला या चुनाव जित्ला हार्ला भन्ने हाम्रो चिन्ता होइन । चिन्ता त्यो हो यो पार्टी फुट्यो भने परिवर्तनका एजेन्डा समाप्त हुन्छन् । जनता, कार्यकर्ता निरास हुन्छन् । त्यसको फाइदा पश्चगामीले उठाउँछन् । २००७ सालदेखि परिवर्तनको पक्षमा रहेका जनताले जुन त्याग बलिदान गरे र आज परिवर्तन सम्भव भयो त्यो गुम्छ भनेर पार्टी फुट्न हुँदैन भनेर हामी लागेका हौँ, अरू कुनै कारणले होइन ।
चुनाव अघि गठबन्धन बनाएर उम्मेदवारी दिएका कारण कम्युनिस्टहरूले सहज बहुमतका साथ सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । तर अहिले खोलो त¥यो, लौरो बिर्सियो भनेजस्तो देखिन्छ । किनभने चुनाव जितिसकेपछि पार्टी एकता भनिए पनि यसलाई टिकाउन जरुरी छैन भन्ने सोचले काम गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । तपाईं चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?